Nagu saabsan - Zhuoer Chemical Co., Ltd.
Zhuoer Chemical Co., Limited waxay ku taallaa xarunta dhaqaalaha --- Shanghai. Waxaan had iyo jeer u hoggaansannahay "kiimikada horumarsan, nolol ka wanaagsan" iyo guddiga Cilmi -baarista iyo Horumarinta teknolojiyadda kiimikada, si looga dhigo mid loo adeegsado nolol -maalmeedka aadanaha si nolosheenna loo hagaajiyo.
Hadda, waxaan inta badan wax ka qabannaa dhexdhexaadiyayaal dabiici ah, agrochemicals, waxyaabaha lagu daro cuntada iyo kiimikooyin kale oo horumarsan. Agabyadan horumarsan ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa kiimikada, daawada, bayoolaji, muujinta OLED, iftiinka OLED, ilaalinta deegaanka, tamar cusub, iwm.
Waqtigan xaadirka ah, waxaan ku leenahay laba warshadood oo wax soo saarka Gobolka Shandong. Waxay dabooshaa aag 30,000 mitir murabac ah, waxayna leedahay shaqaale ka badan 100 qof, kuwaas oo 10 qof ay yihiin injineero sare. Waxaan samaynay xariiq wax -soo -saar oo ku habboon cilmi -baaris, tijaabo tijaabo ah, iyo wax -soo -saar ballaaran, waxaan kaloo dhisnay laba shaybaar, iyo hal xarun imtixaan. Waxaan tijaabineynaa badeecad kasta oo badan kahor bixinta si aan u hubinno inaan siinno macaamiisheena badeecad tayo wanaagsan leh.
Waxaan soo dhoweyneynaa macaamiisha adduunka oo dhan inay soo booqdaan warshadeena oo aan wada dhisno iskaashi wanaagsan!
Aagga Aqoon -isweydaarsiga
Dhaqankayaga Muhiimka ah:
Si aan macmiilkeenna ugu qiimeyno, inaan u sameyno iskaashi faa'iido leh;
Si aan macaash ugu samayno loo -shaqeeyayaashayaga, si aan uga dhigno kuwo midabo leh;
Si aan dano ugu samayno shirkadeena, si aan u sii horumarino si ka dhakhso badan;
Si loo taajiro bulshada, si looga dhigo mid is -waafajinaysa
Qalab horumarsan, nolol wanaagsan: iyadoo la kaashanayo sayniska iyo farsamada, oo laga dhigo inay u adeegto aadanaha nolol maalmeedka, si ay nolosheena uga dhigto mid hagaagsan oo midab leh.
Si loo siiyo macaamiisha alaab iyo adeegyo heerka koowaad ah, si macmiilku u qanciyo.
Si aad ugu dadaasho inaad noqoto bixiye kiimiko oo la ixtiraamo.
Macaamilka Marka Hore
Ballan -qaadyadayada addeeco
Si loo siiyo baaxad buuxda hibooyinka
Wadajir iyo iskaashi
Si aad ugu fiirsato dalabka shaqaalaha una daboosho baahiyaha macmiilka